ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: 2010
ကိုယ်တော်ချောထံသို့ မဲရူးရောဂါ ကူးစက်လာပါသည်
ဟုတ်တာ မှန်တာကို ပြောကြစမ်းပါ ဂတုံးတို့ရာ
ကိုယ့်စကားနဲ့ကို ဘာမှလည်းမတင်ချင်သေးဘူး ဂတုံးတွေကိုအမြင်ကပ်တဲ့ရောဂါကလည်း စိတ်ထဲကလိကလိဖြစ်နေတယ် ............ ဂတုံးတွေကသိတဲ့အတိုင်း သပုတ်လေလွင့်အရမ်းတော်တာ မြန်မာပြည်ကလည်း မဲရောဂါကထနေတော့ စာရေးသူ(ကိုယ်တော်ချော)ထံသို့ ဤသို့သော်အရူးရောဂါကူးစက်လာပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်........ ဂတုံးတွေကို နိပ်ကွပ်ချင်တာလည်းပါတယ်.......... ဒီဂတုံးတွေကို ကြည့်မရဘူးဗျာ..... ဘာကြောင့်ကြည့်မရလဲ လမ်းမှန်ကိုမပို့ပေးလို့ ..... သူတို့ထမင်းငတ်မှီအရေးကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်တယ် ..... ကိုးကွယ်တဲ့ကောင်က ကုလားမှန်းလည်းသိတယ် ကုလားဖြစ်ကြောင်းကို မပြောဘူး..... ရွှေတိဂုံသမိုင်းအတ္ထုပ္ပတ္တိကို ဖတ်ရတာ တလွဲ ဥက္ကလာပတိုင်းပြည်ဆိုတာ အိန္ဒိယကတိုင်းပြည်မှ မြို့ နာမည်ကိုရေးထားတာ ..... အိန္ဒိယတိုင်းပြည်မှ ဥက္ကလာမြို့ နာမည်ကိုအစွဲပြု၍ မနေ့တစ်နေ့ကမှ ဖြစ်လာတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း(ခေါ်) ဥက္ကလာတိုင်းပြည်ကို ဥက္ကလာတိုင်းပြည်လို့ကောက်လုပ်ချလိုက်တယ်..... ဒေါက်တာသန်းထွန်းပြောတာကိုလက်ခံတယ်ဆိုရင် အိန္ဒိယကုလားပြည်က ဥက္ကလာပတိုင်းပြည်၊ သာကေတတိုင်းပြည်တွေကို မြန်မာပြည်မှာ မှည့်ခေါ်ဆိုရကနေ မြန်မာပြည်မှာဘဲ ဖြစ်သွားသလို ရှိသယောင်ယောင်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့ ၈တုံးတို့.....
ဂတုံးတွေ ငါပြောတာ မကျေနပ်ရင် ပို့စ်အရှည်အနေနဲ့တင်ပေးမယ်... ကြားလား...... လူကိုအရူးတော့မလုပ်နဲ့ ငါ့လက်ကလည်း တအားယားနေတာ........
မည်သူမဆိုမဲထည့်နိုင်တယ် စာရေးသူ(ကိုယ်တော်ချော)မဲအခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်မယ်......
ဘေးမှာ မဲထည့်နိုင်ဖို့ ပေးထားတယ် လွတ်လပ်စွါ မဲပေးကြ ..... ဘယ့်သူမှ ဖမ်းမဲ့သူ မရှိဘူး ကြိုက်တာပေး
Posted by messenger at 6:54 AM
ဘုရားနှင့် ကုလားမရောစေရန် (သို့) ဘုရားကဘုရား ကုလားကကုလား
ကျတော်ရေးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ် မစစ်စမ်းသပ်နည်းမှာ ကျတော်ဘာသာမပြန်ခင် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီး တစ်ယောက်ပြန်ဖူးပါတယ်.......... ကျတော်က ဘုရားလို့ပြန်ထားတဲ့နေရာမှာ ထာဝရတည်ရှိတဲ့ ဘုရားလို့ ဘာသာပြန်ထားပါတယ်.....
ကျတော်ပြောတဲ့ဘုရားနဲ့ ထာဝရတည်ရှိတဲ့ ဘုရားနဲ့ မတူဘူးဟုစောဒကတတ်ပါတယ်..... ဒါကြောင့်ကျတော်ဘက်က မှန်ကန်ရှင်းလင်းကြောင်း သက်သေပြရတော့မယ်..... ကျတော်အရင်ဆုံး မေးခွန်းနည်းနည်းလောက် ပြန်မေးချင်ပါတယ်.....
ကျတော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများက ဖခင်ကို အဖေလို့ခေါ်တယ် အာရဗ်လို အရ်ဘ်(أب )လို့ ခေါ်တယ် အင်္ဂလိပ်က ဖာသား(သ်)(Father)လို့ ခေါ်တယ် ဂျာမနီက ဗက်တာ (Vater) လို့ခေါ်တယ် အိန္ဒိယကုလားက ပါးပါးလို့ခေါ်တယ် ဒါပေမဲ့ ဒါတွေအားလုံးဟာ ဖခင်ကို ညွှန်းဆိုခြင်းတွေပါပဲ.....
ရှာဖွေကျွေးမွေးမူ မပြုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တာနဲ့ ဖခင်လို့ မသတ်မှတ်ဘူးဟု ဆို၍ မရပါ..... ထာဝရမတည်၇ှိတာနဲ့ တည်ရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘဲ ကိုးကွယ်မူပြုခံရသည့်အရာတိုင်းကို ဘုရားလို့ ခေါ်ဆိုလို့ရပါတယ်..... (ဥပမာ - လူတစ်ယောက်က နွားကို ကိုးကွယ်ရင် နွားကဘုရား(God)ပါပဲ.....
အာရ်ဗ်ကမ္ဘာမှလူများနှင့် အနောက်တိုင်းသားများက ဘုရား(God) ရဲ့ရှိရမဲ့အရည်အသွေးများကို ဂုဏ်ဖော် ပြောကြတဲ့အခါမှာ ဘုရားသခင်ဆိုတာ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ရမယ် ထာဝရတည်တံ့ရမယ် မသေရဘူး......
ဒီလိုဂုဏ်များကို ဖော်ထုတ်ရေးသားကြတော့ ဂေါတာမက ဒီလိုဂုဏ်ဓာတ်တွေကို မပြည်စုံဘူးဖြစ်သွားတယ် သေတယ် ......ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ဘူး ...........ထာဝရလည်း မတည်တံ့ဘူး....... ဒီမှာ ဂေါတာမကို God အဖြစ်ခေါ်ဆိုဖို့ အယူတင်သွင်းခွင့် မရတော့ဘူး........... ဂေါတာမကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဝန်ခံသွားခဲ့တယ်..... ဒါကြောင့် ဂေါတာမဟာ (God)ဘုရားမဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာသိခွင့်ရသွားခဲ့ပါပြီ..........
ကိုးကွယ်မူခံရသူတိုင်းကို ဘုရားလို့ခေါ်ဆိုလို့ရပါသည်။ ဒီအထဲမှ ထာဝရတည်တံ့လို့ ထာဝရဘုရားလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဟာ ဘုရား၏ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ရပ်သာဖြစ်ပါသည်။ ကိုးကွယ်တာနဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုမရောမိပါစေနဲ့ခင်ဗျာ။ (စကားချက်- အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည် ထာဝရတည်တံ့သော ဘုရားဖြစ်ပါသည်။ ကျတော်တို့သည် မူရင်းအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကွဲလွဲမူရှိမည်စိုးသောကြောင့် အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်လို့သာ မူရင်းအသံထွက်တိုင်းသာ ခေါ်ဆိုနေကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်ဟု ကျတော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ ဆိုပါတယ်......)
လွတ်ကင်းအောင်နိုင်မှ ဘုရားလိုလည်း ပြောဆိုကြပြန်တယ်.....
(၁) လူတွေအားလုံးဟာ ဘုရားကို ဘာကြောင့် ကိုးကွယ်ကြပါသလဲ.....?
ကျတော်ခံယူချက်များ၊ ကျတော်သိထားသောအမြင်များ အများနဲ့တူညီမူရှိရဲ့လား ဖတ်ကြည့်ကြပါ...
အဓိကအချက်ကတော့ အားကိုးချင်လို့ (ကိုယ်မတတ်နိုင်သည်အမူအရေးကိစ္စများကို ဘုရားကပေးနိုင်သည့်ဟု ယုံကြည်စွဲမှတ်ရခြင်း)ဖြစ်ပါတယ်.... နောက်မှ အဆင့်ဆင့်တွေခွဲခြားလာတယ်.... ဖြောင့်မတ်ရမယ် မှန်ကန်ရမယ်... ဆိုးခြင်းကောင်းခြင်းအရာရာကို ဆုံးဖြတ်ရမယ်.....
ဥာဏ်ပညာတော်နဲ့ ပြည်စုံရမယ်.... လူအပေါင်းတို့ထက် ထက်မြက်ရမယ် သာလွန်ရမယ်.....ကျတော်တို့လျှောက်လှမ်းမဲ့ ဘဝအတွက် ပညတ်ချက်တွေ သွန်သင်မူတွေ ချမှတ်ပေးနိုင်ရမယ်.... စတာတွေခွဲခြားစိတ်ဖြာလာကြတယ်.....
နံပတ်တစ် အသေအချာဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးပြောရရင်တော့ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ အားကိုးချင်လို့ ဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြတယ်...... အားကိုးတာ မဟုတ်မဘူးလို့ ငြင်းနေမူဟာ လိမ်လည်နေခြင်းပါ.... ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတဲ့သူတိုင်းဟာ မွတ်စလင်မ်၊ ခရစ်ယာန်တို့ကိုးကွယ်နေသော ကိုးကွယ်မူပုံသဏ္ဍန်မျိုးနဲ့ ကိုးကွယ်နေကြတယ်....
(ဟောလီဝုဒ်နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင် ဘရက်ပစ်ကတော့ ဘုရားဆိုတာသူ့အတွက်မလိုဘူး Atheist(ဘုရားမဲ့ဝါဒ)က ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ရုပ်ဝတ္တူပိုင်းဆိုင်ရာကိုယုံကြည်မူက ၈၀ရာခိုင်နှုန်းလို့ ဆိုထားပါတယ်..... ရူပ်ဝတ္တူဆိုင်ရာအကြောင်းအ၇ာများကို အလေးပေးမူရှိပါသည်။ ဥပမာ ဟိန္ဒူကျောင်းသွားပြီး ရုပ်ဝတ္တူကိုအလေးပြုကောင်း ပြုမယ် ခရစ်စမတ်အချိန်အခါရောက်ရင် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသွားမယ်.... မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ပျော်ပွဲကျင်းပချင်ကျင်းပလိုက်မယ် လူအမြင်ကောင်းအောင် သူ့နာမည်ကြီးဖို့ လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့ ပြေလည်မူက အဓိကလို့ ဆိုထားလိုက်ပြန်ပါတယ်.... အင်ဂျနာဂျိုလီကတော့ သူ့အတွက်ကတော့ ဘုရားဆိုတာ သူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်ပါပဲ ..... သူ့သားသမီးများထဲမှာ မွတ်စလင်လည်းရှိတယ်. ... ခရစ်ယာန်လည်း ရှိတယ်.... ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းရှိတယ်လို့ ဆိုထားပြန်ပါတယ်.... ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကတော့ ဂျူးဘာသာဝင်တစ်ယောက်လို့ သိရပါတယ်.... (စကားချက် ... ဒီသုံးဦးကို မြန်မာပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သို့ပြောင်းလဲလာပြီးဟု ဝါဒဖြန့်ဝေတာကို တွေ့ရလို့ပါပဲ.....) နောက်တစ်ခုက ဂျက်နီဖာလိုပတ်က Atheism(ဘုရားမဲ့ဝါဒ) တစ်ယောက်ပါ ......
ဗုဒ္ဓဘာသာ အယောက်တစ်ရာမှာ ကိုးဆယ်ကိုးယောက်က ရုပ်တုဆင်းတုရှေ့သွားပြီး ဘုရားကယ်ပါ ကျမ့သားလေးကို၊ ကျမ့မိသားစုကို ၊ ကျမ့စာမေးပွဲအောင်ဖို့ စသည်ပုံစံမျိုးနဲ့ ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ ပုံစံမျိုးပါပဲ.....ဒီလိုလူမျိုးများကို ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာသန်း၃၅၀ဟာ ၁၀သန်းတောင်ပြည့်ပါအုံးမလားမသိဘူး..........
သူတို့စကားအရပါပဲ သူတို့ခိုင်းနှိုင်းသွားတဲ့ လူသုံးယောက်လုံးက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပါတယ်....
ဖာရာဒေး၊ လိုးရီး ပတ်စ်ရို ၊လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ ဒီသုံးဦးလုံးက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပါတယ်..... ဤသူသုံးဦးနဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားတော့ေ၈ါတာမဟာ ခရစ်တော်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ လူသုံးဦးတို့၏ အဆင့်လောက်ပဲ ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြရာရောက်နေသလိုပါပဲ.....
ဒါဆို ဗုဒ္ဓက (GOD)ဘုရားမဟုတ်ရင် သူ့ရုပ်ရှေ့မှာ ဘာလို့ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုကြသလဲ ( If the Buddha is notagod, then why do people worship him?) မေးခွန်းမေးလိုက်တော့ ဆင်ခြင်ပေးလိုက်ပုံက ဆရာတစ်ယောက်အခန်း ထဲဝင်လာလို့ အလေးပေးခြင်း၊ သူရဲကောင်း၊အာဇာနည်ရှေ့မှာ အလေးပြုတဲ့ ပုံစံမျိုးပါလို့ ဆင်ခြေပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်.... သူ့စကားမှာတင် အရမ်းရှင်းသွားပြီး သူ့စကားက သူများကို လိမ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တာ အဖြေတွေဖြစ်လာတယ်......
ဒါဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက မြန်မာပြည်အတွက် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ အာဇာနည်တစ်ယောက်ပဲ စိတ်ထဲမှာ မှတ်ယူရုံထက် ဘာမှ မပိုသလိုပဲပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား .... ဒါပေမဲ့ တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ဂေါတာမကို ဆရာ၊သူ၇ဲကောင်း၊အာဇာနည် တို့ထက်ပိုပြီး ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုမူမျိုးကို တွေ့ရပါတယ်.....
နောက်တခုက ဂေါတာမ့ရုပ်တုရှေ့မှာ ဝတ်ပြုခြင်းအားဖြင့် ရင်ထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းဖြစ်ပွားစေတယ်ဆိုတော့ ဖာရာဒေးတတ်ထားတဲ့ လျှပ်စစ်ပညာရပ်တွေ လိုးရီး ပတ်စ်ရိုတတ်ထားတဲ့ ဆေးပညာရပ်တွေ ၊ လီယိုနာဒိုဒါဘင်ချီတတ်ထားတဲ့ ပန်းချီပညာရပ်တွေကို ကျတော်ဖာရာဒေးရုပ်တု၊ လိုးရီးပတ်စ်ရို၊ လီယိုနာဒိုဒါဘင်ချီရုပ်တု ရှေ့မှာ ဦးချဝတ်ပြုရုံနဲ့ ကျတော်တတ်မြောက်လာနိုင်ပါသလား????????
ဒါဆိုရင်တော့ ဘာတစ်ခုမှ မလေ့လာမလိုက်စားဘဲ ကျတော် ကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ ပုံများကို အိမ်မှာဝယ်ချိတ်ဆွဲထားပြီး ထိုင်ရှီခိုးရမလို ဖြစ်နေပြီ
ကျတော် Atheism ဆိုတာကို မြန်မာအဘိဓာန်ထဲမှာ ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာ "ထာဝရဘုရားရှိတယ်လို့ မယုံတဲ့သူ" လို့ ဘာသာပြန်ဆိုထားပါတယ်..... တကယ်တော့အဖြေမှန်ကတော့ ဘုရားရှိသည်ဟုမယုံတဲ့သူပါ.... အာရ်ဗ်ကမ္ဘာနှင့် အနောက်တိုင်းသားများအများစုကတော့ Atheism များကို သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်များသာ ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုကြပါတယ်..... Atheism ဆိုတာကို non religion/anti-religion(ဘာသာတရားမဲ့)လို့လည်း ပြောဆိုကြပြန်ပါတယ်..... အဲလ်ဘတ် အိုင်းစတိုင်း(၁၈၇၉-၁၉၅၅)က သူ့ကိုယ်သူ Atheist တစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုထားပါတယ်..... အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့လည်း မကူးပြောင်းခဲ့ပါဘူး..... သူကတော့ ဂျူးလူမျိုးစုနွယ်ဝင် တစ်ယောက်ပါ..... တစ်ခုဆိုးတာက ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကို နကန်းတလုံးမှ မသိသည့်အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းက ပါးစပ်အာချောင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ချီးမွမ်းပြောဆိုလိုက်တာပဲ....
သူချီးမွမ်း ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားကို တကယ်လက်တွေ့ကျကျအကောင်အထည်ဖော် ချေဖျက်လိုက်တာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိဘ အသိုင်းအဝန်းမှာ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ (atheism တယောက်ဖြစ်တဲ့) မော်စီတုံးပါပဲ..... အိုင်းစတိုင်းပြောတဲ့လက်ထက်တုန်းက ဗုဒ္ဓဘာသာက ယခုလက်ရှိသန်းပေါင်း ၃၅၀ ထက်မကရှိနိုင်ပါတယ်.... အိုင်းစတိုင်းပြောတဲ့အချိန်တုန်းကဆို တရုတ်ပြည်မှာလူဦးရေ သန်းပေါင်း၁၀၀၀ ဆိုရင် သန်းပေါင်း၈၀၀ လောက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်....
ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးမော်ဇီဒုန်း/မော်စီတုံး(၁၈၉၃-၁၉၇၆)ကတော့ ဘုန်းကြီးအာဏာရှင် စနစ်ကြီးစိုးမူအမှောင်အောက်မှ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသောနိုင်ငံသစ်အဖြစ် တည်ထောင်ဖို့ လမ်းစကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်....... မော်စီတုံးကတော့ ပြောမရဆိုမရငနာဂတုံးတွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချ သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်.....
တရုတ်ပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဆုတ်သုန်းပျောက်ကွယ်လာခဲ့ပါတယ်.... အစပိုင်းကမ္ဘာပေါ်မှာ သန်းပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်လောက် ရှိနေရာကနေ အိုင်းစတိုင်းပြောပြီးကမှ မော်စီတုံးလုပ်လိုက်လို့ သန်းပေါင်း၃၅၀ကျော်လောက်ပဲ ရှိတော့ပါတယ်.... (စကားချက်- ကိုယ့်ဘာသာတရားကိုကျော်ပြီး အခြားဘာသာတရားကိုချီးမွမ်းခန်းဖွင့်ရင် စောက်ရှက်ကွဲတတ်တယ်..... ဘယ့်သူကိုမှမကြည့်နဲ့ ....... အိုင်းစတိုင်းကိုပဲ ကြည့်)......
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလေ အိုင်းစတိုင်းအကြောင်းကိုအရမ်းပြောကြတာပဲ ကျတော်တစ်ခုသင်ပေးလိုက်မယ် (သင့်ဘေးကသူငယ်ချင်းက အိုင်းစတိုင်းအကြောင်းပြောရင် မော်စီတုံးအကြောင်းကို ပြန်ပြောရင်းနဲ့ အနိုင်ယူလိုက်ပါ)
(မော်စီတုံးသတ်ခဲ့တာ သန်းပေါင်း၅၀ မှ ၇၀ ကြားရှိပါသည်။
( စကားချက် မြန်မာပြည်မှလူဦးေ၇ သန်းပေါင်း၅၄သန်းကျော်ရှိသည်။ မော်စီတုံးသတ်လိုက်တဲ့ လူဦးရေဟာ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေထက်တောင် များနေပါလား)
(မော်စီတုံးက ဟစ်တလာထက် သတ်တာပိုများပြီး ဘာကြောင့်လူအများမသိကြပါသလဲ....)
စာရေးသူသိရသလောက် အကြောင်းအရာတချို့ က ဒီလိုပါ......
(ဟစ်တလာဟာ သူသေပြီးနောက် သူရဲ့နာဇီဝါဒနဲ့အတူ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်..... သူ့လူမျိုးဂျာမနီများကိုယ်တိုင်က သူ့ကို ရှုတ်ချပြစ်တင်ဝေဖန်ရေးသားကြပါတယ်...... ဂျူးလူမျိုးကိုယ်တိုင်ကလည်း နာဇီပါတီဝင်များကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်.... အမေ၇ိကန်၊ အနောက်ဥရောပမီဒီယာများရဲ့အာရုံစိုက်မူကို အထူးခံရ၍ ဟစ်တလာဟာတကယ့်ကို လူသတ်သမားအဖြစ်ထင်ရှားသွားခဲ့ပါတယ်.... မော်စီတုန်းရဲ့ပါတီက လူအမြောက်အများ လူသတ်ခဲ့ကြောင်းကို တရုတ်ပြည်မှတရုတ်လူမျိုးကိုယ်တိုင်က ဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်း တစုံတရာမှမရှိခဲ့ပါဘူး..... မီဒီယာသတင်းလောကကိုလည်း ကျယ်ပြန့်စွာ ဖွင့်လင်းမပေးခဲ့ပါဘူး..... ထို့အတွက်ကြောင့် မော်စီတုန်းအကြောင်းကို လူအများ မသိရခြင်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်......
မော်စီတုံးအကြောင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန်သိလိုလျှင်တော့ ဝီကီပီဒီယာမှာကြည့်လို့ရပါတယ်....
မော်စီတုံးသွားမှန်မှန်တိုက်ရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးမြန်းခန်းတောင် ပါ ပါတယ်.....
Posted by messenger at 10:09 PM
Labels: ဘုရားနှင့် ကုလားမရောစေနဲ့, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဘုန်းကြီးနဲ့စစ်တပ်ပေါင်း လောင်းကျော်တော့ ကြားကပြည်သူမြေဇာပင်ဖြစ်
ကျတော်မှာ ရေးထားပြီးသောအကြောင်းအရာအချို့ ရှိပါတယ်...... ကျတော်တင်ဖိုိ့ရှိသောလည်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလာမည်ကို မလိုလားသောကြောင့် မတင်တော့ဘဲ ရပ်နားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်......
(၁)ဘုရားနှင့် ကုလားမရောစေရန် (သို့) ဘုရားကဘုရား ကုလားကကုလား
(၂)သိပ္ပံကော သဘာဝကောမဆန်သော အကြောင်းအရာတစ်ခု (ခေါင်းစဉ် မတပ်ရသေး နေ၊လ၊မြင့်မိုရ်တောင်၊ငရဲ၊ နတ်ပြည်တို့ကဲ့သို့သော ဟာသမျိုး)
(၃)ဆရာတော်ကုလားများ၏ စကားဝိုင်း (အပိုင်း ၃)
(၁) သန်းရွှေနဲ့ေ၈ါတာမ လုပ်တာမဟုတ် မဟုတ်တာလုပ် (အနဂ္ဂ၊ဘာဘူ ကိုအစွဲပြု)
(၆)ဘုရားပွင့်ဖို့ လိုင်စင်ရထားသော အိန္ဒိယ(ကုလားပြည်)
အခုတင်လိုက်တဲ့ပို့စ်နဲ့ ပေါင်းရင် ခုနှစ်ခုပေါ့....ဒီအကြောင်းအရာများအားလုံးသည် ရေးပြီးနေပါပြီ....... တင်မယ်မတင်ဘူးဆိုတာ ကျတော်စိတ်ပေါ်မှာ မမူတည်ဘဲ ခင်းဗျားတို့ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာသာ မူတည်ပါတယ်....
တိရစ္ဆာန်တွေ သူ့တပါးအမြင့်မြတ်ထားရာကိုမှ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ချင်ကြတယ်.....
ရဲတွေက ကြည့်ရုံသက်သက်ပဲလား (အစိုးရမူဝါဒ ----->> မင်းတို့ကြိုက်တာလုပ် ငါတို့နဲ့ အတိုက်အခိုက်မလုပ်နဲ့)
သောက်လေ သောက်လေ အငတ်မပြေ မြောင်းရေဟေ့ မြောင်းရေ
မိုးရွာရင် မိုးရေ ချိုးမယ် မေမေလာရင် နို့စို့မယ် ဖေဖေလာရင် အုန်းသီးခွဲစားမယ် (အမျိုးသမီးခမျာ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် သားသမီးငါးယောက် ဆင်းရချို့ တဲတဲ့ဒဏ်ကို အလှုးလဲခံစားနေရမပဲ...... (ဂတုံးတွေ မျက်လုံးမှာ ဒီပုံရိပ်တွေကို မမြင်ဘူး မခံစားတတ်ဘူး နားမလည်ဘူး)
(ဒီကလေးသူငယ်များရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အတ္တအမှောင်ရိပ်တွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ သင်္ခန်းခြုံဂတုံးများရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ မပေါ်ဘူး..... ကျောက်တုံးကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ကောင်တွေ ဒါတွေကိုဘယ်လိုနားလည်ပါမလဲ)
ဟော့ဒီဘက်က ပန်းယူကျအုံးမလား ရှင် အဲဆော်၇ီး.... ဗျာ
ငါ့ကို လှလှလေးရိုက်ပေး..... (စတိုင်သစ် ဟန်သစ်)
သင်္ခန်းခြုံဂတုံးတွေ မင်းတို့မျက်လုံးထဲမှာ ဘာတွေမြင်လဲ .....
သင်္ကန်းခြုံဂတုံးများ မမြင်သော ပုံရိပ်များ
ဓာတ်ပုံကြည့်ရုံနဲ့ စိတ်မချမ်းသာလိုက်တာ ကယ်ဆယ်ရမယ် ထောက်ပံ့ရမယ် သင်္ခန်းခြုံဂတုံးတွေ မင်းတို့ ရင်ထဲ ဒီလိုခံစားချက်တွေ ရှိလား.....
က...... ကလေးငယ် ချစ်စဖွယ်
ဒီလူတွေ နေပူထဲမှာ တစ်နေ့ကုန် တစ်နေ့ခမ်း အလုပ်လုပ်တာ ဘယ်လောက်ရမယ် ထင်လဲ အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ တွက်ရင် (ရည်ညွှန်း ----- > လူကြားကောင်းအောင် အော်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ)ခင်ဗျားတို့ ဘုန်းကြီးတစ်ယောက်ကို လှုတဲ့ မနက်ပိုင်းဆွမ်းတနပ်စာနဲ့ သွားညီမျှတယ် ...... ဘုန်းကြီးကို လှုမယ်အစား ဒီလူတွေ ပေးလှုလိုက်တာ ခင်းဗျားတို့ ပိုကုသိုလ်ရပါတယ်........
မြန်မာပြည်က ဂိုဏ်းစတားဖောက်ခွဲရေး သမားများ ဖြစ်ပါတယ်..... ဘယ်နားမှာ ဆူပူမလဲ နီနီရောင်ဂတုံးတွေကို တွေ့၇မယ် ....ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာ ဒါလားကွ...
ဗလီကျောင်းဝန်းထဲထိကို ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးသွားတာ.......... အကြမ်းဖက် လူမိုက် သင်္ကန်းခြုံတွေ
ဂတုံးတွေ လမ်းရှင်းလမ်းရှင် မင်းတို့ကို သတ်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူး ကားကားတော့ လာမလုပ်နဲ့ ပစ်လိုက်မယ်....
အလားကားသက်သက်ကိုင်ထားတာ မဟုတ်ဘူး .... ထိရင် ပစ်မှာ.... တပ်မတော်သာလျှင် အမိ ၊ အဖကွ တပ်မတော် ပေးတဲ့ဆန်ကို စားပြီး အမိန့်တိုင်း လုပ်ရမှာ ငါတို့အလုပ်ကွ.....
ဂျပန်ကြီးရယ် မပစ်ချင်ပါဘူး ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်နေတတ်ရတယ်.....
ငါတို့ကို မစော်ကားရင် ဘာမှမလုပ်ဘူး ချချအားပေးတယ်......
လူမိုက်လူရမ်းကားတွေ ပြည်သူတွေတောင် ကြောက်နေရတယ်...........
လာမစနဲ့ကွာ ကြည့်ထား တုတ်ယူမလား ဓားယူမလား ကြိုက်တာပြော ငါတို့ဆီမှာ အကုန်၇ှိတယ်..... (ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာသာ အေးမြတဲ့ ဒမြအရိပ်တဲ့ဗျာ)
(ဘာကောင်လဲကွာ ဆရာကြီးလား နာသွားမယ် ငါတို့ကို ဘာမှတ်လဲ ရဲတွေတောင် ကြောက်လို့ ကြည့်ရုံသက်သက် လုပ်နေတာ မတွေ့ဘူးလား ဘယ်ကောင်မှ ဝင်အာချောင် စားမပြောနဲ့ ...... မင်းအမေ မင်းညီမတွေ ငါ့မယားဖြစ်သွားမယ်)
(ယာကူဆာ ဂိုဏ်းစကားတွေလေ အေးမြတဲ့ ဓမ္မအရိပ်တဲ့ဗျာ ကြည့်ပါအုံး ဒမြအရိပ်ကို စကားမပီလို့ ပြောလိုက်တာ ဖြစ်မယ်.....)
ဟဲဟဲ အမေရိကန်စစ်သားလို တော့ ခေတ်မှီပညာနဲ့ ဖောက်ခွဲမသုံးနိူင်ဘူး .... ရိုးရိုးမာ့ဂ်နဲ့ ဖောက်ခွဲရေးသမားလုပ်နေတာ .....
မြို့ ပေါ်ကြီးမှာ ဘယ့်ကောင်ကို ထုမလဲမသိဘူး မတန်တဆဗျာ ပြည်သူတွေမှာ သူတို့လက်ထဲ သေနတ်ကိုင်ထားရုံနဲ့ကို ကြောက်နေရပြီ ....
ရဲဘော်တို့ တက်..... ရှေ့မှာ ချီးပုံရှင်းတယ် ..... တဝက်ဆီခွဲဝေပေးထားတဲ့ အာဏာကို အာဏာအပြည့်လိုချင်တဲ့ ဂတုံးတွေကို သတ်.....
တပ်မတော်ဆိုတာ မိုးပေါ်ထောင်ပြီး ချောက်တာမဟုတ်ဘူး.... ပစ်ရင်မှန်အောင်ပစ်တယ်...... ပစ်
Posted by messenger at 11:12 AM